Madaxweyne Gaas oo baarlamanka ka dalbaday in si hufan loo wada shaqeeyo xilligan lagu jiro – Radio Daljir
Janaayo 28, 2014 2:36 b 0
Garoowe, January 28, 2014 – Madaxweynaha dowladda Puntland Prof. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka dalbaday gollaha wakiilada inay la yeeshaan wada shaqayn rasmi ah oo qoto dheer, si looga gudbo marxalada adag ee lagu jiro.
Madaxweynaha ayaa shalay shir la qaatay dhamaan xildhibaanada dowladda Puntland.
dib-u-heshiisiinta, nabadgeliyada, caddaladda iyo dib-u-habeynta dhaqaalaha ayuu sheegay madaxweynuhu inay maamulka hortaalo xilligan lagu jiro.
Prof. Gaas ayaa xusay in ay muhiim tahay wada shaqaynta gollaha fulinta iyo weliba gollaha wakiilada, wuxuu codsaday madaxweynuhu in wada shaqaynta wax badan looga gudbi karo.
Madaxweynaha ayaa balanqaaday in dowladdiisa ay si dhow ula shaqayn doonto gollaha sharci dejinta isla markaasna ay tix-gelin doonaan waxyaabaha golluhu soo jeediyo, wuxuu ku celceliyey isku xirnaan dhan walba ah.
Baahin: Isniin 27 Jan -2014, Caawa Iyo Daljir, Weriye Maxamed Cabdilaahi C Kooshin ~ Daljir ~ Garoowe